Dhegaha & indhahaba oo la’ayd kama hor istaagin inay guulaysato! | Hadalsame Media
Home Ku Biiri Aqoontaada Dhegaha & indhahaba oo la’ayd kama hor istaagin inay guulaysato!
Dhegaha & indhahaba oo la’ayd kama hor istaagin inay guulaysato!
(Alabama) 24 Maajo 2018 – Magaceeda oo saddexan waa “Helen Adams Keller”, waxa ay dhalatey Bishii June 27-kedii Sannadkii 1880-kii waxaana ay ku dhalatey “Tuscumbia Alabama” ee dalka Mareykanka, iyadoo wax ku baratay college-ka “Radcliffe” Sannadihii u dhexeeyay 1900 ilaa 1904.
Waxa ay noqotey “Helen” qalin jibinteeda ka dib macallimad wax ka dhigta jamacadaha iyo dugsiyada waddanka mareykanka qaar ka mid ah, waxa ay kaloo ahayd qoraa alifa buuggaag badan islamarkaasna u ololeeya siyaasadda oo ay dawr weyn ka qaadatay.
Hellen waxa ay aheyd qof indhoole ah, sidoo kalena waxa ay ahayd qof dhagoole ah, waxay noqotay gabadhii ugu horraysay ee indhaha iyo dhegahaba la’ ee qaadata heerka koowaad ee jaamacadeed oo ahaa “Bachelor of Art degree”.
Helen marna isma dhiibin kama aysanna harin in ay raadacayso sidii ay nolasha heer sare uga gaari laheyd una guulaysan lahay iyada oo lixaadkeedu uu kala dhiman yahay.
Murtiyada qiimaha badan ee laga dhaxlay waxaa kamid ahaa: “Inaad indhoole noqoto waxaa ka xun in aad indho wax arka haysato balse aragtida qalbiga aad la’dahay.”
Waxaa kaloo kamid ahaa murtidii laga dhaxley:
“in aad la socoto ruux saaxiib aad tihiin meel mugdi ah waxa ay ka wanaagsantahay in aad keligaa meel iftiin leh socoto.”
Helen waxa ay dhimatey ama geeriyootay Bishii June markii ay aheyd 1 Sannadkii 1968-kii iyada oo da’deedu tahay 88 sano.
Dulucda qormadani waxa ay tahay: maadaama uu Eebe ina siiyay awoodo gaar ah oo aan ku guuleysan karno, waa in aan ka faa’iideysano. waxaana xaqiiq ah in awoodaha uu ilaahay inagu mannaystay aysan lahayn xuduud, waa in aan raadcaynaa oo aan raadinaa sidii aan u guulaysan lahayn adduun iyo aakhiraba.
Waxaan filayaa in Helen tusaalo noogu filantahay haddii ay indhaha iyo dhagahaba la’ayd haddana ay guuleysaty maxaa inoo diidaya in aan guuleysano iyada oo uu Eebaheen inoo dhamaystiray lixdeena lixaad.
Waan awoodnaa Waana guulaysan karnaa anagoo Alle talo saaraneyna.
Qalinkii: Abduwahab Mohamed Bacle.
Previous articleQiso cajiib ah oo ku saabsan sida ay kusoo islaamtay Sarah Jane Booth
Next articleChelsea oo 40 milyan + Morata ku raadinaysa Mauro Icardi